OPDOf Yaadni Injifannoo Uummata Oromoo Dhuunfachuu Eessaa dhufeef – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOPDOf Yaadni Injifannoo Uummata Oromoo Dhuunfachuu Eessaa dhufeef
OPDOf Yaadni Injifannoo Uummata Oromoo Dhuunfachuu Eessaa dhufeef?
Damee Boruu: Caamsaa 19, 2019
Uummatni Oromoo xiqqaa fi guddaan, Kabaa amma Kibaa, Bahaa amma Dhihaa akka nama tokkotti irree wal qabatee diina isaa dura murannoo guutuun dhaabbatee wareega guddaa baasudhaan injifannoo cululuqqaa akka gonfate atakkaroo hin qabu. Ragaaf uummata addunyaa biyya lafaatu ijaan argee ture. Namni ykn gareen haaluu yoo jiraate kan eenyummaa isaa hin beekne qofa tahuu qaba. Uummatni Oromoo Mootummaa nama nyaata EPRDF kan humna TPLFiin dursamu of irraa kaasuuf, gitaan, gandaan, amantii fi umuriin gargar wal hin fohiin ykn adda wal hin qoodiin qabsaawe. Hundeen injifannaa keenyaa tokkummaa keenya akka ture mamiin hin jiru.
Eeyyee yaroo injifannoon dhiyaatu namootni muraasni OPDO keessa gara uummata goruu waan filatan fakkaatu. Utuu Uummatni Oromoo injifannoo hin gonfanne eenyu wajjin akka dhaabbatan gaaffii hin qabu. Warra isaan ijaaratee wajjin hafanii hojii isaanii fokisaa fi yakkamaa akka itti fufan ifa jira. Jarjartiin yaroof aangoon harka OPDO itti tasa kufuun dirqama humni Uummata Oromoo bakka bu’ee as bahee OPDO waan taheef. Garuu OPDOn abbaa injifannoo akka hin taane hunduu ni beeka. Namni OPDO keessa MM tahe Kononel Abiyi gaafa muudamu akeekni isaa kaayyoo Minilik bakkaan gahuuf akka hawwii qabu ifatti himate. Qabsawwan Oromoo muxxannoo bara dheeraa qabnuuf imaamatni isaa kun yaaddoo guddaa nu keessatti uumee jira. Yaaddoo duwwaa tahee hin hafnee dugugaan saynii Oromoo ifatti deemaa jira. Warri” bilisa baanee jirra” jedhee Uummata Oromoo dongorsuu yaalan illee of iiti leeya’uu fi gadduu qabu.
Waan dagatamuu hin qabne ijoollee OPDO ergamtuu TPLF tahanii guddatan kun yaroo hundaa kan dhagaa guddatan gad aantuummaa Uummata Oromoo akka tahe dha. Haalli kun sammuu mataa isaanii uummata isaanii irratti akka ammantaa hin qabaanne isaan godheera. Hundi isaanii diqaalota Habashaa waan tahanii miti miila ilmaan nafxanyoota jala kan gangalachuu jalqaban.Yaaddoo isaanii jalaa bahuuf yaroo tattaafatan nafxanyoonni immoo funyoo mormatti hidhanii harkatti galshachuuf ayyaana argatan.
Akka seenaa barreesitoonni yaroo sana jiraatan jedhanitti Miniliki walkaa Uummata Oromoo fixee jira. Akka OPDOn haaltu utuu hin taane Miniliki ilmaan Oromoo irraa harama muree, harka ciree akka jiru ijoollen ijoollee warra hammenyi kana fakkaatu irratti raawwatame ragaaf jiru. Uummatni Oromoo nama faashitii akka Minilikiif kabajaa tokko illee qabaachuu hin danda’u. Nama akeeka MIniliki bakkaan gahuuf deemu miti nama yaada Miniliki qabu iyyuu ayyaanni Uummata Oromoo akka nu irraa darbu kadhannaa keenya halkanii fi guyyaa tahuu qaba.
Akeekni Miniliki jaalalaa fi walitti dabalamuu ykn ida’amuu wajjin wal hin fakkaatu. Akkeeki Miniliki jibinsaa fi saynii duguginsaa irratti kan hundeefame. OPDOn illee amma milli ishee lafa qabatutti nama sobaa jirti malee karaa Miniliki sana irra deemaa dhokachuuf gugufaa jirti. Uummtni Oromoo Milliyooni lamaa ol tahu qe’ee isaa irraa buqqaa’ee jireenya gadadoo keessa jira. Mootummaa haa tahu Midiyaan tokko waa’ee rakkina isaanii kaasu hin jiru. Ormi biraa xiqqoon yoo buqqa’ee Mootummaa fi Midiyaan Habashaa hundi oduu afarsuudhaan akka gargaarsa argatan tahaa jira.
OPDOn injifannoo Uummata Oromoo dhuunfattee Uummata Oromoo bal’aa miti miseensota OPDO Lammumaa Oromoo qaban iyyuu gara mogaatti baaftee aangoo hark diqaalota Habashaa galfattee jirti. Hidhaa, ajjeechaa, qabeenya barbadeessu fi shamran keenya akka gudeedaman kan gochaa jiru diqaalota Habashaa kana akka tahe beekamaa dha. Midiyaan, ijaarsii fi beektonni Habashaa hundi har’a afaan tokkoon fi irree tokkoon Oromiyaa diiguu irratti hojjechaa jiru. Hojii isaanii kana immoo Mootuummaa Federaalaa fi MNO wajjin qindeefatnii ofaa jiru.
Haalli keessa jirru haalla baayyee fokkisa tahee jira. Ilmaan Oromoo gaafa Wayyaanee sanaa ol adamsamaa, hidhamaa, ajjeefamaa fi saamamaa jiru. OPDOn karaa dandeessu hundaan uummata Oromoo gargar baasaa fi wal itti buusaa umurii ishee dheerefachu barbaadi. Komandi postii fi waraanni hiriyaa hin qabanne Uummata Oromoo irratti dagaagaa jira. Kan Wayyaaneen illee hin goone OPDO Uummata Oromoo boombii xayyaaran gubdee jirti. Gaasa kemikaala nutti darbamee jira jedhanii jiraatonni Dhiha Oromiyaa himachaa turan. Utuu yaroon hin saaxilamne yaroo kana namichi akkuma Miniliki walkaa Oromoo fixee jira.
Akeekaa fi kaayyoon diqaalota Habashaa nageenya sabaa fi sablammii Oromiyaa keessa jiranii eeguu malee nageenyaa fi jireenya Uuummata Oromoof dhimma hin qaban. Nafxanyoonni Oromiyaa keesaan jiran ejjennaa mootummaa kana waan barechanii beekaniif jecha biyya Oromoo falmachuu itti jabeessaa jiru.Mootummaan Amhaaraa galma aaadaa Amhaaraa Finfinnee keessatti ijaarachuuf murtessee jira. Maalif kun hunduu taha yoo jenne haala ittiin biyyaa Oromoo qabatan mijjeefachuuf. Yoo diqaalloonni Habashaa kun hin jiraannee ayyaana amma qaban kana waan hin argataneef daddaffiin saammachuu qabu.
Erga OPDOn aangoo mootummaa qabatee as waan baayyee naaf liqqifamuu didee yaroo hundaa sammuu koo yaada na hooquun qaba. Wagga 28 darban kana keessa rakkinaa fi dhumaatii Uummata Oromoo irra gahaa tureef burqaan isaa inni duraa tokko OPDO dha. Haqa kana Uummatni Oromoo bareechee waan beekuuf irra deddeebinee itti himuun barbaachisaa miti. Garuu maalummaa OPDO utuu beeku maaliif Uummatni Oromoo injifannoo dhiigaan argatee warra umurii isaanii guutuu diina wajjin jiraataniif aangoo kennee taa’ee ilaala?
Warri OPDO kun warra dhugaa hin dubbanne. Warra qaanii fi safuu hin beekne. Warra albaadheessa akka jaldeessa ofii nyaatee buluu barbaadu. Namoota waraabesaa gadii tahan. Kan dhokatee ofii saamate nyaatu bineesa keessa jaldeessa duwwaa dha. Waraabessi illee yuusee wal waame nyaate. Namni ganama fugsoo ka’e galama isaa hin gahu. Uummatni Oromoo jala muree kan hubachuu qabu OPDOn isa ceesisuu miti ofii iyyuu cee’aa akka hin jire dha.
Walii gala Uummatni Oromoo keessattu Qarree fi Qeerroon Oromoo akka bara Wayyaanee tokkummaan kaanee diqaalota Habashaa shira Uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti xaxaa jirtu of irraa kaasuundirqama keennya. Gaafa diinni nu irratti ijaaramaa jiru kun hundi wal qabatee nu irratti bobba’e of irraa ittisuuf wareegama guddaa nu gaafchuun ni mala. Mootumman diqaalota Habashaa fi ijaarsonni Habashaa hundi uummata keenya cabsanni jilbeefachiisuuf halkanii fi guyyaa nu irratti hojjechaa jiru. Harka wal qabannee yaroon yoo kaane injifannoon fagoo hin jiru.
Ijifannoo Uummata Oromoof!
Gadan Gadaa Bilisumma Ti!
OPDO will be history in a few months provided ABO and KFO are united and a free fair election is held.